Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Une eziningi ongakhetha lapho unquma kanjani ukuhamba. Thanda igama movie adumile, ungaya nge izindiza, izitimela, nezimoto. Uma kuziwa ngokuthatha uhambo lwe-Italy, Nokho – there are some definite perks to going by…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Venice ingenye yamadolobha idolo kakhulu futhi imilingo e-Italy futhi kalula ngesitimela. Ngokuvakashela Venice ngesikhathi njengoba kuza amaholidi ePhasika, ungakwazi ukujabulela ezimnandi entwasahlobo sezulu. Lokhu kukuvumela ukuba uchithe usuku lonke ngaphandle. Travel to the historic center…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Paris neRoma phezulu ohlwini ebhakedeni cishe zonke isihambi sika. Le mizi umbukwane ezidume ngokuba amasiko abo, eziphambili emhlabeni cuisine, izakhiwo enkulu kanye nokunye okuningi. Nakuba iRoma ne Paris ziqhelelene, basuke kahle zixhunywe isitimela. This means…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Izincwajana zemininingwane amade Italy siduduze hhayi kuphela kodwa abanye ukubukwa umxhwele. Omunye izinto ezihamba phambili mayelana ukuhamba ngesitimela e-Italy ithuba ukubheka indawo kuhle njengoba niya kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye. Kwezinye izingxenye Italy,…